Date My Pet » Vanogona Pet Allergies uye Dating pamwe?
kubudikidza Catherine Monreal
Last updated: Jan. 12 2021 | 2 Maminitsi verenga
saka, wawana mumwe munhu kuti unoda kuziva zviri nani. Paunotaura navo, kana-munhu kana paIndaneti, pane kunyemwerera pachiso chako. You feel that things couldn’t get any better than they are, uye ipapo ukadzidza kuti vane chipfuwo muri sema kuti. Ko munhu kuita? uchada mapfumo pasi ukama nokuda chisimbwa yako? Pane zvinotsiva usingaoni munhu zvakare? For vanhu vakawanda, pane.
Chekutanga, regai munhu azive kuti une chisimbwa. Izvi zvinokosha kuva ukama rakashama uye vakatendeseka (pakutanga), uyewo vangakwanisa kuderedza maitiro kuti une. Vangazviita sei ichi? Vanogona nechokwadi vari kupfeka mbatya itsva pamberi zuva rako (asina kudyidzana pamwe mhuka pashure vakarasa vakapfeka). Uyezve, vanogona kuva anopinza mumakwenzi kana chimwe chinhu chakafanana kushandisa vasvika nokuda zuva rako (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Rinotevera nzvimbo kukoshesa kuziva kwokuomerwa chisimbwa yako. Ungagona kutora OTC chisimbwa mushonga uye kukwanisa kubata manheru? Kana une maitiro kwazvo kuti zvinoda kuva EpiPen? Nokuti avo kuti zvinoda kuva EpiPen, unofanira kuongorora ukama pamusoro mukuru chechetere, because literally, your health is at risk. Kune vamwe, unogona chete nechokwadi iwe tora zvako chisimbwa mushonga vasati kuwana pamwe navo, uye ipapo akuteerere ugumbuke sezvo usiku anoenderera mberi.
Kana ukapedza nguva pamusoro panzvimbo yavo, vanogona ndokumisa nenzvimbo mhuka haabvumirwi. Somushandi akawedzera rukoko wokudzivirira, vanogona kuva mupise muchina kumhanya kuchengeta allergens kubva mhepo. Pane zvakawanda zviri pamusika nokuti chisimbwa murwere. zvigadzirwa izvi kuchaderedza uwandu dander mudenga, kana kushanda somuganhu kuchengeta allergens kupinda akasarudzwa nzvimbo.
Nokuti vakawanda chisimbwa vanorwara, vachava uchitova Extras izvi navo, asi hachingavarwadzi kusazvidzokorora. Nechokwadi nguva dzose une masero waswedera. Kana uine nezvimwe zvinhu kuti anokonzera itchy, mvura-mvura meso uye zvakawanda, ungangodaro kukwezva zuva rako kana mhino yako inongogara achimhanya kana zvinoita sokunge zvawave ndichichema. Unogona kunge chisimbwa ziso anodonhedza nemi pamwe. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Ita nezvimwe zvinhu zvenyu chikonzero iwe kukosora? Chikosoro madonhwe huro lozenges kunokosha kuva shoma kunetseka zuva. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Vamwe lozenges kana kunyange candies zvakaoma anogona kuwedzera mwando chete zvakakwana kutora sekenyedzo kure uye jasi huro yako kuitira kuti uise pfungwa zuva rako.
With yakazaruka, akatendeseka kukurukurirana uye zvishoma gadziriro, unogona kuva vachiri inakidzwe ukama kunyange une chisimbwa kuti hwechipfuwo.
Achifambidzana Muduku Woman in 5 Easy Matanho